Wararkii ugu danbeeyey shirka Kismaayo, Wixii lagu qori lahaa war-murtiyeedka oo shirar gooni gooni ahi ka dhasheen – Madal Furan
Hoy > Warka > Wararkii ugu danbeeyey shirka Kismaayo, Wixii lagu qori lahaa war-murtiyeedka oo shirar gooni gooni ahi ka dhasheen
Wararkii ugu danbeeyey shirka Kismaayo, Wixii lagu qori lahaa war-murtiyeedka oo shirar gooni gooni ahi ka dhasheen
Kismaayo (Madaal Furan) – Waxaa weeli ka socda magaaladda Kismaayo shirkii Golaha Iskaashiga Maamulada Goboladda waxaana shirkaas ka sokow bilowday shirar gooni gooni ah oo dhex maraya Hogaamiyayaasha maamulada Goboladda.
Kulamadan ayaa la sheegayaa inay ka dhasheen kadib markii uu yimaaday isfahmi waa u dhexeeya madaxda Maamulada ee War Murtiyeedka lagu qori lahaa.
Madaxweynayaasha Puntland, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa door bidaya in War Mutiyeedka si adag loogu xuso in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay faraha ula gelin doorashooyinka la filaayo inay ka dhacaan deegaamadooda.
Haseyeeshee, Madaxda Maamuladda Galmudug iyo Hirshabeelle ayaa iyaguna waxay laabta ka jecel hyihiin in War Murtiyeedka lagu xuso sidii Maamuladda Goboladu ay DFS ugaga heli lahaayeen dhaqaalaha taageerada ah ee ay uga baahan yihiin, sidoo kale in lagu qoro War-murtiyeedka arrimaha la xiriira ammaanka iyo horumarka deegaamadooda.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in maantaba uu xirmi doono shirk aka socda magaaladda Kismaayo inkastoo horay loo qorsheeyey in maalinta beri ah uu soo xirmi lahaa kulankaasi.
Ehlu Sunna oo ku kala qaybsan heshiiskii DFS ay la galeen